Waxaa ka mid ah: guddi cPanel, Softaculous iyo madal
multidomain, shahaadada SSL e Kaydinta NVMe / SSD
Waa maxay sababta aad u dooranayso microchip.ch Hosting?
XARUNTA XOGTA LA XULASHADARO EE EU / USA / ASIA
Martigelinta Shabakadda Diiwaangelinta Domain Microchip
Goobahayaga martigelinta waxaa lagu qalabeeyay qalabka ugu fiican iyo farsamada software; Helitaanka xogtaada waxaa ilaalinaya dab-damisyo joogto ah oo la cusboonaysiiyay. Khubaradayadu waxay ka shaqeeyaan madal ay goobtaadu ku nooshahay saacad kasta.
Haddii aad gaarto xadka martigelinta Linux, u tag xalka sare hal gujin kaliya. Haddii baahiyahaagu isbedelaan, waxaad xor u tahay inaad ku noqoto qorshihii hore ee martigelinta wakhti kasta
Waxqabadka xarumahayaga Hosting Linux si joogto ah ayaa loo falanqeeyaa oo loo hagaajiyaa, si loo siiyo mareegahaaga waqtiyo jawaab celin degdeg ah.
Baahi kasta oo horumarineed waxaa jira xal Hosting oo ku habboon mashruuca aad ka shaqaynayso. Qorshayaasheena waxay la qabsadaan xajmiga degelkaaga, taageer luqadaha barnaamijyada aadka loo isticmaalo oo ay ku jiraan guddiyo maamul oo sahlan in la isticmaalo
Xirfadlaha SSD Hosting
Adeeg si buuxda loo cabbiri karo oo kula koraaya!
Ku haboon kuwa ku barnaamijyada PHP, Perl, Ruby, Python. Waxaa ku jira: cPanel panel, Softaculous and multi-domain platform, shahaadada SSL oo lagu daray iyo kaydinta SSD.
Martigelinta aasaasiga ah
Maamula 1 Website
5 GB oo boos ah SSD
5 sanduuq oo aan xadidnayn *
Helitaanka Pop / Sawirka ayaa lagu daray
Helitaanka WebMail ayaa lagu daray
Ka-hortagga fayraska / Antispam ayaa lagu daray
Soo dejiyaha qoraalka jilicsan
Dhisaha Goobta Ikhtiyaarka ah
Domain .IT waxaa ka mid ahaa
Shahaado SSL waxaa ku jira
XARUNTA XOGTA EU / USA / ASIA
24/7/365 Taageerada Farsamada
50 GB ee gaadiidka bishii
30 maalmood waad ku qanacday ama lacagtaagii ayaa dib loo soo celiyay
Marti gelinta birta
Maamula 5 Website
16 GB oo boos ah SSD
Dhismaha goobta ayaa lagu daray
Shahaadooyinka SSL waxaa lagu daray dhammaan Domains
256 GB ee gaadiidka bishii
Maamula 10 Website
64 GB oo boos ah SSD
10 xisaab email aan xadidnayn *
1024 GB ee gaadiidka bishii
Maamula 20 Website
128 GB oo boos ah SSD
20 sanduuq oo aan xadidnayn *
2048 GB ee gaadiidka bishii
100% NVME Waxqabadka Sare ee Shabakadda
Ku haboon kuwa ku barnaamijyada PHP, Perl, Ruby, Python. Waxaa ku jira: cPanel panel, Softaculous iyo platform
Domain-badan, shahaadada SSL oo lagu daray iyo kaydinta NVMe.
16 GB meel bannaanNVMe SSD
64 GB meel bannaan NVMe SSD
128 GB meel bannaanNVMe SSD
* isticmaali kara dhammaan boosaska laga heli karo xirmada martigelinta ee la doortay - liiska qiimaha dadweynaha marka laga reebo canshuuraha.
Microchip Domain Registration Web Hosting waa mid degdeg ah oo sahlan in la isticmaalo guddi kontorool
On Microchip Domain Registration Web Hosting waxaan isticmaalnaa guddiga kantaroolka ee inta badan ay isticmaalaan kuwa doorta Linux kaas oo kuu ogolaanaya inaad habayso hawlaha Hosting. Waxaad soo rogi kartaa faylasha, rakibi kartaa codsiyada oo aad maamuli kartaa kaydinta wakhti aan dheerayn. Waxaas oo dhan iyo wax ka badan!
Ku saabsan Microchip Web Hosting Domain Registration,Khubaradayadu waxay kuu abuuraan kaadh xirfadle ah oo dhamaystiran "Google My Business" Sidan ayaad ku joogi kartaa maabka iyo mashiinka raadinta marka macaamiishaadu ay raadiyaan ganacsigaaga ama ganacsigaaga la midka ah. Xiriirinta, goobta, lambarka taleefanka iyo saacadaha furitaanka, wax walba waxaa loo geli doonaa habka ugu wanaagsan si loo fududeeyo raadinta macluumaadka iyo si fudud macaamiishaada kuugu soo gaaraan.